आईसीयूबाटै छोरीज्वाइँलाई टीका – Aaj ko Sandesh
भरतपुर। भरतपुरस्थित सेन्ट्रल अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयूमा) फागुन ११ गते मार्मिक दृश्य देखियो । नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नं. १ का क्या’न्सरपी’डित परशुराम भट्टराईले आफ्नी कान्छी छोरी शान्ता भट्टराईलाई आईसीयूबाटै विवाहको टीका लगाइदिए । छोरी शान्ता र ज्वाइँ सुवास न्यौपानेलाई उनले आईसीयूबाटै आर्शिवाद दिए ।नारायणगढको हरिहर मन्दिरमा विवाह सकेपछि शान्ता र सुवास क्या’न्सर रो’गको उपचार गराइरहेका बुवाको आर्शिवाद लिन अस्पतालको आइसीयू पुगेका थिए । छोरीज्वाइँलाई आईसीयूभित्र देख्नेवित्तिकै सकीनसकी परशुरामले दुईहात जोडेर नमस्कार गरे । केही मुस्कुराउने प्रयास गरे ।
जिब्रोमा क्या’न्सर भएकाले उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । दुनोमा ल्याइएको टीका पालैपालो लगाएर छोरीज्वाइँलाई आर्शिवाद दिए ।
बुबाको हातबाट टीका लगाएर आर्शिवाद लिएपछि बुबालाई सञ्चो हुन्छ भन्दै ढाढस दिए, छोरीज्वाइँले । ‘बुवा नआत्तिनुस्, हजुरलाई ठीक हुन्छ, पर्सि फर्किएर छिट्टै भेट्न आउँछौं’ भन्दै छोरीज्वाइँले गरेको वाचा पूरा हुन पाएन । छोरीज्वाईलाई विदाई गरेकोे झण्डै १७ घण्टापछि परशुरामले प्राण त्या’गे ।
डिउटीमै रहेकी नर्स अनिशा धरेलले खाना खुवाउँदाखुवाउँदै उनको नि’धन भएको बताइन् ।
डिउटीमै रहेका चिकित्सक डा.सुरेन्द्र सिग्देलकाअनुसार बिहेकै दिन छोरीज्वाइँ अस्पतालमा आउने पूर्वजानकारी थिएन । सामान्यतः अस्पतालको आईसीयुभित्र त्यसरी जान दिन मिल्दैनथ्यो । ‘तर, उहाँको अवस्था निकै जटिल थियो, उहाँहरुले अनुरोध गरेपछि नाई भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन,’ डा. सिग्देलले भने, मानवीय संवेदनाको कुरा पनि भयो ।’पुरा पढ्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भदौ २८ गतेपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन हुँदैछ । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रुपमा कसको प्रवेश हुन्छ भन्ने जनचासो छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार (आज)सम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार अब छिट्टै कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृृत्व लामो समय खाली राख्न नहुने भन्दै सचिव घिमिरेले अब प्रक्रिया थाल्न लागिएको बताए ।
‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै खालको प्रस्ताव गरेको छैन, हामी प्रक्रिया अघि बढाएर छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छौं,’उनले भने,‘कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषदको हो ।’
सुत्केरी आमा: हस्पिटलमा पैसा ति’र्न नसक्दा अ’लप’त्र, २२ दिनको बच्चाको एकदमै बिजोग [भिडियो सहित]
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र २७ गते शनिबारको रा’शिफल